Nampidi-doza ny herinaratrin’ny Jirama tao Mandaniresaka Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nirefotra ny “transfo” an’ny Jirama. Nampiahiahy ny besinimaro ny antony nampirefotra an’ity “transformateur” iray ity. Tamin’ny 8 ora sy sasany alina, no voalazan’ireo mponina manodidina sy ny tao amin’ny sekolin’ny Seminera, fa nisy zavatra re nipoaka mafy saingy tsy nisy taitra ny olona tamin’izany. Samy nanana ny filazany ny tsirairay nanoloana io tranga io. Ny eritreritra niraisana kosa dia saika nitontona tamin’ny hoe “nisy nanimba”. Ity andrin-jiro misy ilay “transformateur” ity, dia ao anatin’ny faritry ny sekoly Seminera Mandaniresaka. Mamatsy herinaratra ny sekoly sy ireo trano mifanakaiky aminy. Ny talata tamin’ny 5 ora maraina, raha handeha hanao fanatanjahantena ireo seminarista, dia nosarihan’ny herinaratra avy hatrany ny tovolahy iray ka tsy nahetsika sady nianjera tamin’ny tany ka vao maika nananosarotra ny fanavotana azy. Ny akanjon’ireo namany no nisintonana azy avy eo. Naratra teo amin’ny fen’ity mpianatra iray ity satria voakasik’ilay tariby miranirany. Roalahy izy ireo no main’ny herinaratra. Ny iray afa-niala haingana. Ny iray kosa no tena voa mafy. Soa ihany fa tsy naharitra ela izany fa saika kila forehitra teo ilay ankizilahy. Efa betsaka tokoa manko ny tranga tahaka itony, ary ny ankamaroany dia tsy azo natao na inona na inona fa kila mitovy amin’ny saribao. Raha ny fanazavan’ireo solontenan’ny Jirama dia tokony tsy hanao vinany mihitsy amin’ny herinaratra satria mamono mahafaty tokoa izy io. Maherin’ny 220 V ny tanjany raha mbola tsy nandalo fampihenana amin’ny alalan’ny “transformateur” sy ny “régulateur”. Nampitandremana daholo ny mpianatra mba tsy handehandeha amin’ny toerana izay misy ny tariby miboridana mba hisorohana ny loza. Nampiantso malaky ny Jirama ny tomponandraikitra tao amin’ny Seminera Mandaniresaka Antsirabe.
Fahatapahan-jiro ny talata maraina teo
Tonga tao an-toerana ny teknisianina avy amin’ny Jirama nanamboatra izany ny talata tapakandro maraina. Notapahin’ny Jirama ny herinaratra tamin’iny faritr’i Mandaniresaka iray manontolo iny ny talata maraina teo. Maro ny mponina tao an-toerana no nimenomenona noho izany satria tsy nahafantatra ny zava-nitranga. Noheverin’ny olona fa niverina indray “ra-delestazy” kanefa araka ny nambaran’ny teny anivon’ny Jirama, dia tsy tratra intsony ny nanao ny fampilazana satria tampoka ny toe-javatra. Nandefa teknisianina hamerina amin’ny laoniny ny simba ny tomponandraikitra momba ny jiro. Dimilahy izy ireo no nifarimbona nanao izany ka naharitra ela ihany ny fanamboarana. Betsaka tamin’ireo orinasa teny an-toerana no voatery niato ny asa noho ny jiro tapaka. Mahatonga faty antoka tokoa ny fahatapahan’ny jiro satria miantefa any amin’ny asan’ny tsirairay izy ity, ary tsy maintsy miantraika amin’ny vokatra ho azo ihany koa. Ho an’ity mpivarotra ity manokana izay mampiasa vata fampangatsiahana dia mihena tanteraka hoy izy ny vola miditra raha vao tapaka ny jiro. Azo isaina amin’ny ratsan-tanana tokoa izany asa tsy mila jiro sy herinaratra izany. Ary efa tsy satry mihitsy ny hiasa anatin’ny haizina, satria tsy hahita mangirana akory amin’izay atao rehetra, indrindra raha ny ety andrenivohitra. Ren’ny sofina isan’andro amin’ny haino aman-jery sy mibaribary amin’ny gazety ny fampilazana alefan’ny Jirama rehefa hanapaka jiro izy ireo, hoe “hevero ho toy ny tsy tapaka”, kanefa tsy vita mora ny hihevitra fa mandeha tsy tapaka ny jiro. Ka na ny mpanjifa ihany koa aza dia mba efa manana ny azy rehefa tsy voaloa ny faktiora, hoe “hevero ho toy ny efa voaloa”.